Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamani zokuPhula » Akusekho umdaniso ovumelekileyo kwiiklabhu zasebusuku zaseBerlin
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • umculo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Kungekudala, iiklabhu zasebusuku zaseJamani kuya kufuneka ziyeke ukusebenza nje ukuba izinga losulelo lweentsuku ezisixhenxe lingaphezulu kwama-350 ngabahlali abayi-100,000 kwindawo ethile.
Emva kweseshoni ekhethekileyo yeSenethi yaseBerlin, abaphathi bekomkhulu laseJamani babhengeze ukuba akusayi kuphinda kuvunyelwe ukudanisa kwiiklabhu zasebusuku zedolophu ukuqala ngoLwesithathu oluzayo.
As BerlinAbasemagunyeni baqinisa izithintelo ngenxa ye-spike kumatyala e-COVID-19, iiklabhu kunye nee-disco zisaza kuvunyelwa ukuba zihlale zivulekile, nangona ubukhulu becala ngenxa yobuchwephesha bezomthetho obuthintela urhulumente wesixeko ukuba avale iindawo ezinjalo ngokupheleleyo.
Jemani Abasemagunyeni bommandla kunye nomanyano, nangona kunjalo, bavumile kule veki ukuba kungekudala, iiklabhu zasebusuku kuya kufuneka ziyeke ukusebenza xa izinga losulelo lweentsuku ezisixhenxe lingaphezulu kwama-350 ngabahlali abayi-100,000 kwindawo ethile. IBerlin ngoku imalunga nama-360.
Iindawo zokutyela kunye nee-pubs ziye zavunyelwa ukuba zigcine iingcango zazo zivuliwe okwangoku, nangona izikhokelo ezitsha malunga nokuncitshiswa kwentlalo zibekiwe, zibiza iitafile ezincinci, phakathi kwamanye amanyathelo. Ngokungathandabuzekiyo, zonke ezo ndawo zikawonke-wonke zivuleleke kuphela kwabo baye bagonywa okanye basanda kufumana i-COVID-19, ngokwemigaqo eyaziswa phakathi kuNovemba.
Imithetho emitsha eqala ukusebenza kwiveki ezayo iya kuphinda inciphise inani labantu abathatha inxaxheba kwimisitho emikhulu, kunye nesilingi yeendawo zangaphandle ezibekwe kwi-5,000 kunye nesiqingatha selo nani kwiindibano zangaphakathi. Oko kusebenza nakwimidlalo yebhola ekhatywayo yobuchwephesha ngokunjalo.
Kwiintlanganiso zabucala, kwiimeko apho kukho ubuncinane umntu omnye ongagonywanga othatha inxaxheba, umda uya kuma kwikhaya elinye kunye nabantu ababini abongezelelweyo. Ethetha ngala manyathelo, usodolophu obambeleyo waseBerlin, uMichael Müller, wathi abo “bachanyiweyo kwaye baphola ngokucacileyo banenkululeko engakumbi.”
Nangona kunjalo, nokuba bonke abathathi-nxaxheba bakwelinye kwezi zigaba zimbini, abakavunyelwa ukuhlanganisana ngokwamaqela angaphezu kwe-1,000 500 yabantu kwindawo evulekileyo, kunye nama-XNUMX ngaphakathi.
On BerlinIzithuthi zikawonke-wonke, ngaphezulu kokugonywa okanye ukuchacha, imaski ikwayimfuneko kubo bonke abakhweli, kwaye ukuza kwiveki ezayo iBerliners kuya kufuneka inxibe enye kungekuphela nje ngelixa ukhwele uloliwe kodwa ngelixa ulinde eqongeni. .